Nei Vatengi Vachikurirwa neB2B E-Commerce Personalization (Uye Magadzirirwo Ayo) | Martech Zone
Chipiri, Zvita 21, 2021 Chipiri, Zvita 21, 2021 Tim Beyer
Ruzivo rwemutengi rwagara rwuri, uye rwuri kuramba rwuri, chinhu chinonyanya kukosha kune B2B mabhizinesi parwendo rwavo kuenda kushanduko yedhijitari. Sechikamu chekuchinja uku kuenda kudhijitari, masangano eB2B anotarisana nedambudziko rakaoma: kukosha kwekuona kuti zvese zvinoenderana uye kunaka kwese kwepamhepo uye nekutenga zvisiri pamhepo. Asi, kunyangwe masangano aedza zvakanyanya uye kudyara kwakakura mudhijitari uye e-commerce, vatengi pachavo vanoramba vari vashoma pane kufadzwa nenzendo dzavo dzekutenga online.
Zvinoenderana nedata richangoburwa kubva kuSapio Tsvagiridzo yeB2B kutenga, inoda kusvika 20% yevatengi veB2B nhasi vanonzwa kuti zviitiko zvevatengi zvavari kuita online zvakaderera pane izvo zvavari kuita kunze kwenyika.
2022 B2B Mutengi Chirevo, Simba reKutenga Hukama muInoshanduka B2B Pamhepo Nyika
Chirevo, chakatumirwa na Sana Commerce, inoongorora mamiriro eB2B mutengi zviitiko kuburikidza nelenzi yeanonyatsoziva uye akavimbika sosi: vatengi pachavo. Pakati pezvinonyanya kukosha zvakawanikwa? Mutengi 1 mu4 anonzwa aine chivimbo chekuti masangano nguva dzose ipa ruzivo rwechokwadi panzira dzevashambadziri vavo pamhepo nepamhepo. Uye kana iwo mapoinzi edata achitaura kune chero chinhu, ndeyekuti iyo B2B nzvimbo ine yakawanda nzvimbo yekukura mumaziso evatengi vayo.
Saka, chokwadi chekutenga B2B chinotaridzika sei kubva pamaonero evatengi?
Vatengi veB2B nhasi vanotenga pamusoro pe428 bhizinesi-yakakosha kutenga zuva rega rega, vachishandisa avhareji yemamiriyoni matatu emadhora pagore online. Vazhinji vavo vanotendeukira kune yeanopa e-commerce saiti senzira yesarudzo kana uchiisa maodha aya. Nehurombo, zvakadaro, 3 muvashanu vese vevatengi ava vanotarisana nezvikanganiso zveodha nguva dzese ivo vanotenga (vachitaura zvisina kururama data, senge isina kururama hesera, chigadzirwa, kutumira, uye ruzivo rwemitengo), sechinhu chinonyanya kukanganisa. Vanosvika 94% vanotaura nyaya dzevatengi dzeimwe mhando muB2B kutenga maitiro. Zvichida zvakanyanya kukosha, vatengi vakashuma musiyano mukuru pakati pezvinotarisirwa uye chokwadi kana zvasvika pakugona kwemunhu pamhepo muB2B.
Nerudzi urwu rwekupokana-rakaremerwa pamhepo ruzivo rwunotambudza vatengi veB2B, mubvunzo uri pachena uripo unova: masangano angarwisa sei kushushikana uku kudivi revatengi? Uye, zvakakosha, ndeipi mutengo we kwete uchiita saizvozvo?
Munguva yedenda repasi rose, kusaita kunogona kudhurira makambani bhizinesi ravo. Kutarisana nekubudirira kana kurarama, Pepco yakasimudzira Sana Commerce's yakabatanidzwa ERP uye e-commerce mhinduro, kutanga nzira nyowani yekuenda kumusika muna 2020. Kubatanidza e-commerce uye ERP kwakavimbisa maitiro akarongeka uye isina musono B2B mutengi ruzivo.
Sana's ERP-yakabatanidzwa maitiro aive akakosha mukubatsira Pepco pivot kubva pamakore makumi matatu ekuzvarwa mugovani wemafuta, zvekushandisa mumaindasitiri uye HVAC kumugadziri akakosha uye muparidzi wezvigadzirwa zviri kudiwa zvakanyanya, senge sanitizer yemaoko kuburikidza nechitoro chepamhepo.
B2B vatengi nhasi vanoziva zvavanoda. Vanoziva zvavanotarisira. Uye vakagadzirira kufamba kubva kune vatengesi vavo vepamusoro kana vasiri kuiwana.
Kuwanda kwe62% yevatengi veB2B vanonzwa zvavanotarisira kune mawebhusaiti evatengesi zvakati wandei, zvishoma, kana. hazvina kumbosangana. Zvisingashamisi, semhedzisiro, mana mugumi mabhizinesi eB4B parizvino anotarisana nekupokana nechiteshi chavo chepamhepo kubva kune vatengi. Asi kana ukabvunzwa nezve maficha, mashandiro, uye mabhenefiti evatengi do vanoda kuona kubva kune yavo B2B e-commerce ruzivo, vaive vakajeka nezve izvo zvavanoda kuchinja, uye kuti vatengesi vangavandudza sei kupa kwavo online.
Hafu yevatengi veB2B vakaongororwa vanobvuma kuti zvinopihwa zvakaita semhando yepamusoro yechigadzirwa, kuvimbika kwakavandudzwa uye kuvimba kwakawanda mumukurumbira wevatengesi, mitengo yemakwikwi uye mazwi ekutumira, uye yemhando yepamusoro sevhisi yevatengi zvingave zvinhu zvepamusoro zvinovatungamira kutenga (uye kutengazve) kubva kune vatengesi vepamusoro. Pakati pevatengi veB2B vanotarisana nematambudziko emunhu kunyanya, pane runyorwa rurefu rwezvinhu zvinovimbisa huwandu hwevatengi vemunhu. chaizvoizvo want.
Pamusoro pekufamba kuri nyore uye nekukasira kubuda, vatengi veB2B vanoda kukwanisa kuona kuwanikwa kwechigadzirwa chezvinhu. ivo kutenga nguva dzose. Vanoda kukwanisa kuona uye kutenga zvichienderana zvavo mitengo yakanangana nemutengi, yekudzoka uye yekutumira, uye 28% inotoda kukwanisa kutaurirana nechatbot inoziva nhoroondo yavo yekuodha. Zvakajeka ipapo, kuti vatengi veB2B havasi kungoshungurudzika. Vari kuda zviri nani uye vanoda zvakawanda. Neraki, Sana Commerce's ERP-yakabatanidzwa chikuva, Sana Commerce Cloud, yakagadzirirwa kurerutsa kuomarara kwekutenga kweB2B: kushandisa B2B masangano 'ERP data (senge data revatengi, ruzivo rwechigadzirwa, uye mitengo yemitengo) kusimbisa zvese- uye ruzivo-rakapfuma ruzivo rwevatengi rwuri mushandisi-hushamwari, rwakakwenenzverwa, uye akavimbika.
Sezvo isu takananga muna 2022, masangano anongotangisa mhinduro yeB2B e-commerce uye akamirira kuti maodha apinde mukati, pasina kutarisisa kune ruzivo rwevatengi, vanokurumidza kuziva kuti havasi kuita zvakakwana. Zvakaitika zvisina kunaka pamhepo zvinoramba zvichisundidzira vatengi kure pane kubvumidza e-commerce chiteshi kushanda seimwe nzira yekuwedzera mari yemabhizinesi eB2B ─ vachityisidzira kupa mari yakakura mu-e-commerce kutambisa kumasangano asingakwanise kuwana mutengi wavo wepamhepo. ruzivo kusvika pachiyero, uye munguva pfupi.
Tags: 2022 b2b mutengi mushumob2bb2b mutengib2b mutengi personalizationb2b mutengi mushumob2b kutengeseranab2b kutengeserana nhambab2b rwendo rwevatengib2b personalizationb2b kutengaERPpepcoPersonalizationsanasana commerceSana commerce cloudsapio research
Tim Beyer ndiye COO wepasi rose wetekinoroji kukwira-kumusoro Sana Commerce, uye parizvino ari muNYC seMutungamiriri uye CEO wedunhu reAmerica. Tim ane dhigirii reBachelor muInternational Business Administration uye madhigirii maviri eMasters muFinance (MSc) uye Financial Law (LLM, cum laude).